प्रदेश ५ मा चौतारी र सेन्टरको एकता एक दिनै टुंगो लगाउँछौं : चौतारी उपाध्यक्ष प्रियासन | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
प्रदेश ५ मा चौतारी र सेन्टरको एकता एक दिनै टुंगो लगाउँछौं : चौतारी उपाध्यक्ष प्रियासन
| 172 Views | Published Date : 22nd June 2018 |
सविन प्रियासन उपाध्यक्ष प्रेस चौतारी नेपाल
प्रेस चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश पाँचका इञ्चार्ज सविन प्रियासन २०६२÷०६३ साल देखि दुई वामपन्थी दलहरु एक हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए । पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष समेत रहेका प्रियासन प्रदेश पाँचमा दुईmसँगठनबीच एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन आँफूहरुलाई कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । दुई संगठनबीचको एकता, नेतृत्व लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चेतना अनलाइनका सम्पादक पाण्डव शर्माले प्रियासनसँग गरेको कुराकानी :
प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरबीच एकता पक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
हामी एकता प्रकृयाको संघारमा पुगेका छौं । अघिल्लो साता मात्रै दुबै संगठनका केन्द्रीय समिति बैठक बसेर एकता गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ । दुईसँगठनबीच संयुक्त प्रशिक्षण पनि भइसकेको छ । एकताका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल नै बनिसकेको छ । सम्भवतः एक साता भित्र दुबै संगठनको केन्द्रीय समिति एउटै बन्ने छन् । त्यसपछि हामी प्रदेश र जिल्लाको एकतातर्फ लाग्ने छौं ।
एकता गर्दा केन्द्रमा नेतृत्व कसले लिने सहमती भएको छ ?
अँझै कसले नेतृत्व लिने भनेर निधो भइसकेको छैन । हामीबीच नेतृत्वमा त्यति धेरै विवाद पनि छैन । हामीले संगठनमा लागेको योगदान, लगानी र कृयाशिलतालाई हेरेर नेतृत्व निर्माण गर्ने छौं । दुबै संगठन एउटा हुने कुरा छ । यसमा को व्यक्तिले नेतृत्व लिन्छ भन्ने कुरा गौण हो ।
तपाई २०६२÷६३ साल देखि नै दुबै कम्युनिष्ट पार्टी एक हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो । तपाईलाई यस्तो कुरा गर्दा त्यतिवेल कतिपयले ‘हावा’ तर्कको सज्ञा दिन्थे तर, आज एकता भयो हैन ?
हो मैले २०६२÷०३ साल देखि नै दुई ठूला वामपन्थी दलहरु एक हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएको हुँ । जिल्लामा रहेर पत्रकार संगठनको नेतृत्वमा रहँदा म सधै वाम तालमेको पक्षमा रँहे ।
यो भन्दा अघिल्लो कार्यकालमा मलाई प्रेस युनियका साथीहरुले तालमेल गरौं भनेर म कहाँ प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो । तर, मैले यस्तो अपवित्र गठबन्धन हुन सक्दैन भनेर उहाँहरुसँग गएन । प्रेस चौतारी एक्लै चुनाव लड्यो । मैले एक मतले चुनाव हाँरे । त्यो भन्दा अघिल्लो कार्यकालमा त झन् मलाई प्रेस युनियन अध्यक्ष दिन तयार थियो । मैले वाम गठबन्धन विना म अरु कुनै खाले गठबन्धन गर्दैन भनेर गरिन् ।
म त्यतिवेला पनि अध्यक्षको उम्मेदवार थिए । तर, सचिवमा बस्न तयार भए । वाम गठबन्धन बाँहेका साथीहरुसँग तालमेल गरिन् । यसपटक भने मलाई प्रेस युनिय र सेन्टरको साथ भयो । त्यहि कारणले पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बन्न सफल भए । वामपन्थीले नेतृत्व पाएको र सबै वामगठबन्धन एक भएकाले हामीले युनियनसँग साझा गठबन्ध बनायौं ।
म विगत देखि नै मुलुकको विकासका लागि वाम गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो । अहिले दुई ओटा दल मिल्ने कुराले म निके खुशी भएको छु ।
तपाईले पत्रकार महासंघको केन्द्रको निर्वाचनमा प्रेस चौतारीले प्रेस सेन्टरलाई समर्थन गर्छ भन्नुभएको थियो । तर, गरेन त ?
अब हामीले पूराना कुरा गरेर हुँदैन । हामी त प्रेस सेन्टरलाई नेतृत्व दिन तयार थियौं । तर, त्यतिवेल परिस्थिति अलि वेग्लै थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकारमा गठबन्धन थियो ।
त्यसको प्रभाव हुन सक्छ । सेन्टरका साथीहरुलाई युनियनसँग तालमेल गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । हामी त नेतृत्व दिएर तालमेल गर्ने पक्षमा थियौं । राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ । यसलाई हामीले स्वभाविक मान्नै पर्छ । त्यो एउटा परिस्थितिले निर्माण गरेको घटनाको परिणाम हो । अब विगतको कुरा कोट्याएर काम छैन ।
तपाई प्रेस चौतारी ५ नं प्रदेशको इञ्चार्ज पनि हुनुहुन्छ । यो प्रदेशमा दुई संगठनको एकता कसरी हुन्छ ?
पहिले हामीले केन्द्रको एकता हुन देउँ । त्यस पछि केन्द्रमा कस्तो कार्यविधि आउँछ । त्यहि आधारमा एकता प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
केन्द्रले म्याण्डेट दिएको खण्डमा हामी एक दिनमै यो प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा एकता प्रक्रियाका लागि सहमती गर्न सक्छौं । पाँच नम्मर प्रदेशमा कुनै समस्या हुने देख्दिन म । हामीबीच भावनात्मक एकता भइसकेको छ । दाङको हकमा झन् प्राविधिक कुरा बाँहेक भावनात्मक रुपमा दुई संगठन एक भइसकेका छन् । मैले अहिले प्रेस सेन्टरका साथीहरुसँग पनि अनौपचारीक रुपमा छलफल गरिरहेको छु ।
प्रेस सेन्टरका संस्थापक तथा पत्रकार महासंघका निर्वतमान केन्द्रिय सदस्य अजयदीप शर्मासँग हामी निरन्तर सम्वाद र छलफल गरिरहेका छौं । प्रेस सेन्टरका प्रदेश अध्यक्ष मौसम रोका लगायतका साथीहरुसँग पनि कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । केन्द्रले निर्णय नगर्दै हामीले हतार गर्ने कुरा भएन । तर, केन्द्रमा एकता भयो र हामीलाई म्याण्डेट दिइयो भने प्रदेश पाँचमा सबैभन्दा पहिले एकता पक्रिया टुंगो लगाउँछौं ।
सविन प्रियासन सधै व्यक्तिहरुबीच ‘कनेक्टर’ भूमिका खेल्ने मान्छे हो । म सबैलाई क्षमता अनुसारको अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोँच राख्छु । म कहिले पनि निषेधको राजनीति गर्दैन । मलाई नरुचाउनेहरुलाई पनि स्पेश दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विगत देखि नै मलाई पाँच नं प्रदेशमा प्रेस चौतारीका साथीहरुले मात्र नभएर प्रेस सेन्टरका साथीहरुले पनि नेता मान्छन ।
तपाईले आफ्ना विरोधीलाई पनि म निषेध गर्दैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो । तर, प्रेस चौतारी दाङमा तपाई सधै हावी भएर अन्यलाई अबसरबाट बञ्चित गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
यो आरोप सरासर गलत हो । म कहिले पनि अरुसँग पूर्वाग्रह हुने मान्छे होइन । मलाई जसले सधै निषेध गर्न खोजे तीनिहरुलाई पनि म सम्मान गर्छु ।
चौतारीको हकमा भन्नुहुन्छ भने मैले यस पटक जसले मलाई पत्रकार महासंघ दाङको अध्यक्ष बनाउनुहुँदैन भनेर भन्नुभएका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुलाई नै नेतृत्वमा ल्याएको छु । मैले उहाँहरुको कामको सम्मान गरेको हो । मलाई कस्ले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरामा म कहिले पनि ख्याल राख्दैन । म काम गर्नेलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । मैले मेरा अग्रजहरुको कहिल्यै विरोध गर्दैन ।
म पत्रकारितामा आए देखि सधै मेरो खेदो खन्ने केही अग्रजहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई म सधै नेता मान्छु र उहाँहरुलाई साथमा लैजाने प्रयास गर्छु ।
तपाई त प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको ‘किचेन क्याविनेट’ को मान्छे भन्छन् । एकतामा तपाईको ठाउँ कहाँ हुन्छ ?
म सधै नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सवालमा स्पष्ट भएको मान्छे हो । हाम्रो सँगठनको मुल नेतृत्व गणेश बस्नेत भएकाले उहाँलाई सफल पार्नु मेरो दायीत्व पनि हो ।
म नेतृत्वलाई सधै सहयोग गर्ने भएकाले होला नेतृत्वले मलाई नजिकबाट देख्नु । मैले एकता पक्रियामा मेरो ठाउँ यो हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन । म पदको पछि लाग्ने मान्छे पनि होइन । तर, जहाँ योगदान गरिएको छ त्यहाँ सम्मान हुनुपर्छ र अवसर प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । दुई सँगठन एक हुँदा सविन प्रियासन कहाँ हुन्छ भन्ने गौण कुरा हो । मुख्य कुरा दुईसँगठनबीच भावनात्मक एकता हुनुपर्छ र यो एकताले नेपाली पत्रकारीतामा आमुल परिवर्तनको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हो ।
सभार चेतन अन्लाइन